မဖြစ်မနေ လည်ပတ်သင့်သော တိုကျိုမြို့က (၁၀) နေရာ Japan List
Japan List > TOKYO > မဖြစ်မနေ လည်ပတ်သင့်သော တိုကျိုမြို့က (၁၀) နေရာ
ဒီနေ့တော့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ မဖြစ်မနေသွားရောက်သင့်တယ်လို့ စာရေးသူ ယူဆတဲ့ နေရာ (၁၀) နေရာကို မိတ်ဆက်လမ်းညွန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းက သွားရောက်လည်ပတ်စရာ နေရာ ရာချီရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် ဒီနေရာလေးတွေကို အရင်လေ့လာထားရအောင်။
၁။ Tokyo National Museum (တိုကျို အမျိုးသား ပြတိုက်)
၁၉၃၈ နှစ်ကတည်းက ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၆ ရာစု ခေတ်ကတည်းကစပြီး ဂျပန် လူမျိုးများနှင့်သော်လည်းကောင်း တရုတ်နှင့် အရှေ့တိုင်းမှ နိုင်ငံများစွာ၏ အနုပညာနှင့် သမိုင်းဝင် ပစ္စည်း တစ်သိန်းကျော် ထိန်းသိမ်းပြသထားသော ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။[caption id="attachment_1947" align="alignnone" width="1570"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Tokyo_National_Museum_Front.jpg[/caption]လိပ်စာ: 13-9 Ueno Park, Taito-ku, Tokyo, 110-8712ပြတိုက်၏တရားဝင် site: www.tnm.jp/?lang=en
၂. Tokyo Disneyland (တိုကျို ဒစ်စနေပန်းခြံ)
၁၉၈၃ နှစ်တွင် Walt Disneyက အမေရိကန်ပြင်ပနိုင်ငံများတွင် ပထမဆုံး တည်ဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပန်းခြံကြီးဖြစ်ပြီး ၁၁၅ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ Tokyo DisneySeaဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဧည့်သည်လာရောက်မှု စတုထမြောက် အများဆုံး နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။[caption id="attachment_1948" align="alignnone" width="1126"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/SmallWorldTokyo.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန်။ မနက် ၈:၃၀ – ညနေ ၁၀:၀၀လမ်းညွန်။ Tokyo Metro : Yurakucho Line – Shin-kiba Station. Change to JR Line Train to Maihama Station.တရားဝင် site။ http://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/
၃။ Tokyo Imperial Palace (တိုကျို ဘုရင့်နန်းတော်)
၁၄၅၇ကတည်းကတည်ဆောက်ထားသော ဘုရင့်နန်းတော်သည် ၁၇ ရာစုတွင် တည်ဆောက်ထာသည့် လှပသော အနုပညာလက်ရာများဖြင့် ပုံဖော်ထားသော ပန်းခြံများက ၀န်းရံထားသည်။ ထိုပန်းခြံမှ နန်းတော်ထဲသို့သွားသည့် Nijubashi Bridge (နှစ်ထပ်တည်ထားသော တံတား)က ခြားထားသည်။ ဘုရင့်နန်းတော်ထဲက ပန်းခြံတွင်မူ တစ်နှစ်တွင် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်နေ့နဲ့ ဧပြီ ၂၉ရက်နေ့များတွင် (၂)ခါသာ ၀င်ခွင့်ရှိသည်။[caption id="attachment_1949" align="alignnone" width="3000"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Kokyo0057.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန်။ မနက် ၉း၀၀ - ၄း၀၀ ညနေဘုရင့်နန်းတော်ဘက်သွားသည့် ရထားလိုင်း။ Marunouchi Line – Tokyo Statioတရားဝင် site။ http://sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/koukyo.html
၄။ Shinjuku Gyoen Park (ရှင်ဂျိုကု ဂိုအင် ပန်းခြံ)
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးနဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးသော ပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်ဂျုကုဘူတာမှ ၅ မိနစ်လောက်သာ လမ်းလျှောက်သွားရပြီး မြို့ပြဘ၀၏ ဆူညံရှုပ်ထွေးမှုမှ ခဏတာ အနားယူချင်ပါက မဖြစ်မနေ သွားရောက်သင့်ပါသည်။ မတ်လနှင့် ဧပြီလများတွင်လည်း ချယ်ရီးပန်းများ လှပစွာ ပွင့်လန်းလျက်ရှိသည်။[caption id="attachment_1950" align="alignnone" width="1280"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Shinjuku_Gyoen_National_Garden_-_sakura_4.JPG/1280px-Shinjuku_Gyoen_National_Garden_-_sakura_4.JPG[/caption]ပိတ်ရက်။ တင်္နလာနေ့အချိန်။ မနက် ၉း၀၀ - ညနေ ၄း၃၀တရားဝင် site။ https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/english/2_guide/guide.html
၅။ Tokyo Skytree
မီတာ ၆၃၄မြင့်သည့် Tokyo Skytree သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးသော မိုးမျော်စင် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အမှတ်တင်္ကေသ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Tokyo Skytreeပေါ်မှ တိုကျိုမြို့၏ အလှအပများကို တ၀ကြီး ကြည့်ရှုခံစားလို့ရသည်။[caption id="attachment_1951" align="aligncenter" width="500"] credit:https://c2.staticflickr.com/4/3501/3208917147_38087b23f0.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန်။ မနက် ၀၈း၀၀ - ညနေ ၁၀း၀၀လမ်းညွန်။ Tokyo Metro Hanzomon Line & Toei Subway Asakusa Line : Oshiage Stationတရားဝင် site။ http://www.tokyo-skytree.jp/en/
၆။ Shibuya (ရှီဘူယာ)
တိုကျိုမြို့၏ လူအထူထပ်ဆုံး လမ်းဆုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်များအတွက်အထူး စိတ်ဝင်စား လာရောက်သည့် နေရာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာခေတ်မှီ ဖက်ရှင်များ ၀တ်ဆင်လျက် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုများ ဖလှယ်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှီဘူယာ ရထားဂိတ်နားတွင် နာမည်ကြီးသည့် ဟတ်ချီကို (Hachiko) ခွေးရုပ်လည်း တည်ထားသည်။[caption id="attachment_1952" align="aligncenter" width="640"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Shibuya_Night_(HDR).jpg/640px-Shibuya_Night_(HDR).jpg[/caption]ရှီဘူယာ ဘူတာဖြတ်သည့် ရထားလိုင်းများ။JR Yamanote Line, JR Saikyo Line, JR Shonan Shinjuku Line, Hanzomon Subway Line, Ginza Subway Line, Fukutoshin Subway Line, Tokyu Toyoko Line, Tokyu Den-Entoshi Line, Keio Inokashira Line and the Narita Express.တရားဝင် site။ http://play-shibuya.com/
၇. Ginza (ဂင်ဇာ)
ကမ္ဘာ့ခတ်အမှီဆုံး၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ ခေတ်ပေါ် ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းများ၏ ဗဟို ဟုပင်ခေါ်ရမည့် နေရာတစ်မှာ ဂင်ဇာဖြစ်သည်။ ဂင်ဇာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဈေးကြီးသည့် ဖက်ရှင်အများအပြား ပြသရောင်းချထားပြီး နေ့လည်ပိုင်းတွင် အများသုံးကားများအား ၀င်ခွင့်မပေးပဲ ပိတ်ထားရသည်အထိ လူအများစိတ်ဝင်စားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kabuki-za Theatre နှင့် Shimbashi Enbujo Theatre ပြဇတ်ရုံများလည်း ဖွင့်လှစ်ထားသည်။[caption id="attachment_1953" align="alignnone" width="1024"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Street_at_Ginza_Tokyo.jpg/1024px-Street_at_Ginza_Tokyo.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန် မနက် ၁၀း၀၀ - ည ၁၀း၀၀တရားဝင် site။ https://www.gotokyo.org/en/tourists/areas/areamap/ginza.html
၈. Akihabara (အကီဟာဘရာ လျှပ်စစ်မြို့တော်)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လျပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သမျှ စုံလင်စွာ ရှာဖွေလို့ရသည့် ကမ္ဘာ့လျပ်စစ်မြို့တော်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွားများလည်း မဖြစ်မနေသွားရောက် လည်ပတ်ကြပြီး ဘာသာစကားပေါင်း ၃၀ခန့် စုံစည်းရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။[caption id="attachment_1954" align="alignnone" width="3200"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Akihabara_Car-free_Zone.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန်။ မနက် ၁၁း၀၀ - ညနေ ၉း၀၀ (နေ့တိုင်း)လမ်းညွန်။ Hibiya Line – Akihabara Stationတရားဝင် site။ http://akiba.or.jp/english/
၉။ Tsukiji Market (ဆူကီဂျီ ဈေး)
ဆူကီဂျီ ဈေးသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသော ငါးနှင့်ပင်လယ်အစားအစာများ လက်လီလက်ကားရောင်းချထားသည့် ဈေးတစ်ဖြစ်သည်။ ဝေလငါးမှအစ ပင်လယ်အစာမျိုးပေါင်း ၄၀၀ကျော် ရောင်းချထားပြီး ဈေးဝယ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ လေ့လာရုံသက်သက်လာရောက်သူ အနည်းဆုံး ၁၅၀ခန့် နေ့တိုင်း လာရောက်သည့် ဈေးတစ်ခုဖြစ်သည်။[caption id="attachment_1955" align="alignnone" width="3072"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Tsukiji_fish_market_7.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန်။ မနက် ၉း၀၀ - မနက် ၁၁း၀၀
၁၀။ Meiji Shrine (မေဂျီ နတ်စင်/ဘုရားကျောင်း)
မေဂျီဘုရားကျောင်းသည် ၁၉၁၅တွင်တည်ဆောက်ပြီး ၁၉၂၆ပြီးစီးသည့် မေဂျီ အင်ပါယာဘုရင်နှင့် သူ၏မိသားစုအား ရည်စူးကာ တည်ဆောက်ထားသည်။ ကျောင်းဝန်းထဲတွင် မေဂျီခေတ်က အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနင့် ပန်းချီများ၊ ရုပ်ပုံများအားလည်း စုံလင်စွာပြသထားသည်။ လေးစားမှုပြသသည့် အနေဖြင့် ကျောင်း၏ ဂိတ်တွင် အ၀င်နှင့် အထွက်တိုင်းတွင် ဦးညွတ်ရသည်။[caption id="attachment_1956" align="alignnone" width="1200"] credit:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Meiji-Jingu-Shrine-01.jpg[/caption]ဖွင့်လှစ်ချိန်။ မနက် ၆း၃၀ - ညနေ ၄း၃၀ (နေ့တိုင်း)လိပ်စာ။ 1-1 Yoyogikamizonocho, Shibuya, Tokyo 151-8557တရားဝင် site။ www.meijijingu.or.jp/english/လမ်းညွန်။ - Tokyo Metro : Chiyoda Line – Meiji Jingu Mae Station- Tokyo Metro : Fukutoshin Line – Meiji Jingu Mae Station
View 4620 ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် စစ်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ အိုးခုစ တောင်ပေါ်(ōkusa yama) အလည်သွားကြမလား....
Tokyo | view 3,402